နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ - Nangong Juchun Carbon Co., Ltd.
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အသွေးတို့အတွက် သုံးစွဲသူအား ပြဿနာများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အတိုင်ပင်ခံ၊ အရောင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကို ဖောက်သည်အား ပေးဆောင်ပါ။
ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီမှ နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသည် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်၊ စစ်ဆေးရေးနယ်ပယ်တွင် ဖောက်သည်များအား ဂရပ်ဖိုက်ထုတ်ကုန်အစုံအလင်ဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
အရောင်းစောင့်ကြည့်ရေး ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုကို အချိန်မရွေး၊ တစ်ပတ်အတွင်း ဖောက်သည်သတ်မှတ်ထားသောနေရာသို့ ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံမှု၊ အရောင်းဝန်ထမ်းများထံ တယ်လီဖုန်းဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ။ တပ်ဆင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်၊ ဤစာတမ်းသည် အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။
လေ့ကျင့်ရေး- လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက် ဆိုက်တွင်းလေ့ကျင့်မှုများအတွက် သံမဏိစက်ရုံ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်ထုတ်လုပ်သည့်နေရာများသို့ လည်ပတ်ခြင်း။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု- အသုံးပြုသူ တောင်းဆိုချက်မှ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှု အစီရင်ခံစာကို ရရှိပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် ချက်ချင်း ဖုန်းဖြင့် ယူနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် အသုံးပြုသူကို လမ်းညွှန်ပေးပါမည်။
အဝေးထိန်းကွန်ရက် ပံ့ပိုးမှု၊ ကုမ္ပဏီ၏ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် အီးမေးလ် အွန်လိုင်း နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို သိရှိနားလည်ရန်၊
ဆိုက်ဝန်ဆောင်မှု- သင်သည် အင်ဂျင်နီယာ အခင်းအကျင်းကို နားလည်မှုနှင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များကို အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ စီစဉ်ရန် ပျက်ကွက်ပြီးနောက် 8 နာရီအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီမှ ကတိများ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း- သုံးစွဲသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လယ်ကွင်းဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းများကို စိတ်ကျေနပ်မှုမရရှိပါက ကုမ္ပဏီအား အကြံပြုချက်ပေးနိုင်ပါက ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် ကုမ္ပဏီမှ နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကို ထပ်မံစီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Graphite electrode ကို ရေနံ coke၊ needle coke နှင့် coke pitch ကဲ့သို့သော အရည်အသွေးမြင့် ပြာပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ calcining၊ burdening၊ kneading၊ forming, baking and pressure impregnation, graphitization and then precision machined with professional CNC machining. ထိုကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များ၏ ခံနိုင်ရည်နည်းပါးခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်စီးကူးမှု၊ ပြာမှုန်ကျစ်လျစ်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကောင်းမွန်သော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအားမြင့်မားသော ဝိသေသလက္ခဏာများ ပိုင်ဆိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် လျှပ်စစ်မီးဖိုနှင့် အရည်ကျိုမီးဖိုအတွက် အကောင်းဆုံးလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရည်အသွေးညွှန်းကိန်းများအရ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအား RP ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ HP ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးနှင့် UHP ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။
1. လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုင်ဆောင်သူသည် ထိပ်တန်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လုံခြုံရေးမျဉ်းကိုကျော်လွန်၍ ကိုင်ဆောင်ထားသင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် အလွယ်တကူ ကျိုးပဲ့သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကိုင်ဆောင်သူနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြားရှိ အဆက်အသွယ်ကို ကောင်းမွန်စွာထိတွေ့နိုင်စေရန် ပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးသင့်သည်။ ကိုင်ဆောင်သူ၏ အအေးခံအင်္ကျီသည် ရေယိုစိမ့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
2. လျှပ်ကူးပစ္စည်းလမ်းဆုံတွင် ကွာဟနေသည့် အကြောင်းရင်းများကို ဖော်ထုတ်ပါ၊ ကွာဟမှုကို ဖယ်ရှားပြီးသည်အထိ ၎င်းတို့ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
3. လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်ရာတွင် နို့သီးခေါင်း bolt ပြုတ်ကျပါက၊ နို့သီးခေါင်း bolt ကို အပြီးသတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
4.လျှပ်ကူးပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းသည် တိမ်းစောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပြီး အထူးသဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ gr.oup ကွဲထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အလျားလိုက်မထားရှိသင့်ပါ။
5. မီးဖိုထဲသို့ ပစ္စည်းများ အားသွင်းသောအခါ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြီးများမှ မီးဖိုထဲရှိ ကြီးမားသောပစ္စည်းများ၏ သက်ရောက်မှုကို လျော့နည်းစေရန်အတွက် အစုလိုက်ပစ္စည်းများကို မီးဖိုအောက်ခြေရှိ နေရာတွင် အားသွင်းရပါမည်။
6.လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အရည်ကျိုသောအခါ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အောက်ခြေတွင် အထပ်ထပ်ထည့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ သို့မှသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကို ထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးပဲ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်။
7. လျှပ်ကူးပစ္စည်းအား လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပျက်ဆီးစေသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း တက်လာသောအခါတွင် မီးဖိုအဖုံး ပြိုကျခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
8. ၎င်းသည် အရည်ကျိုထားသောနေရာ၌ သိုလှောင်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် နို့သီးခေါင်းများဆီသို့ သံမဏိအပြားများ မ၀င်ရောက်စေရန် တားဆီးရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် ချည်မျှင်များ၏တိကျမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
Graphite Electrodes နှင့် Nipple တို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ
Conical Thread နှင့် Thread Socket အရွယ်အစားများ
Graphite Electrode ၏ အရွယ်အစားနှင့် ခွင့်ပြုနိုင်သော ပြောင်းလဲမှု